सामाजिक लकडाउनको यात्रा :: रुमा रिजाल :: Setopati
पुस/माघको कठ्यांग्रिदो चिसोमा, त्यो दिन पनि म बिहानै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गाडी पर्खिरहेकी थिएँ। समाचार शाखामा काम गर्ने भएकोले बिहानै रेडियोमा पुग्नै पर्थ्यो। साढे ६ बजे समाचार पढ्न कम्तिमा ६ बजे रेडियो पुग्न ५ बजे नै मैले घरबाट हिडिसक्नु पर्थ्यो।
यति बेलासम्म त रहरको लागि रेडियोमा जोडिएकी थिएँ। तर त्यो दिनदेखि मेरो पत्रकारिता, मेरो पेसन बन्न सुरु भयो। भएको के थियो त त्यो दिन? म कसरी अफिस पुगेँ? त्यो जान्नु अघि मैले पत्रकारिता सुरु गर्दाका दिन पनि सम्झिन मन लाग्यो।
२०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशैभरी एफएम रेडियो खोल्ने लहर चलेको थियो। नयाँ-नयाँ खुलेका रेडियोका श्रोता पनि नयाँ नै थिए। भर्खरै १२ कक्षाको परीक्षा दिएर फुर्सदिली भएकी म रेडियो नै सुनेर दिन काट्थेँ। रेडियोमा धारा प्रवाहका साथ बोलेको सुनेर दंग पर्थेँ। अनि उनीहरुको जस्तै नक्कल गर्न खोज्थेँ।
म पनि यसरी नै बोल्न पाए भन्ने लाग्थ्यो। साँच्चै भन्दा रेडियोमा बोल्न रहर पलाईसकेको थियो। तर गरिबीका कारण मामाघरमा हुर्किएकी मैले, रेडियोमा बोल्ने सपना आकाशकै फलझै थियो। म ५ वर्षकी हुँदादेखि नै आम-बुबाबाट टाढिएर मामला मै हुर्किएँ।
रेडियोमा मेरो आवाज घन्किन थाल्यो। श्रोताले कार्यक्रममा निक्कै फुर्काउथे। पत्रकार भइयो भनेर मेरो पनि भुइँमा खुट्टा थिएन। नहोस् पनि कसरी? आफू त आफू, घरकाले पनि मेरो कारणले गर्व गर्न थालेका थिए। एकदिन बुवा इनरुवामा कपडा सिलाउन जानु भएको रहेछ। त्यहाँ टेलरवालाले मैले चलाएको कार्यक्रम सुनिरहेका रहेछन्।
नचिनेको मान्छेलाई मेरो बुहारी पत्रकार हो, इटहरीसम्म पुर्याइदिनुस् न भन्दै बाइकमा लिफ्ट मागेर पठाउनु भयो। त्यसपछि त समयमा माइक्रो नपाए सासुआमाले नचिनेका कति मान्छेको बाइकमै लिफ्ट मागेर धेरै पटक अफिस पठाउनु भयो। कामकाजी महिलाहरुलाई विभिन्न लान्छाना लगाउने हाम्रो समाजमा एउटा बुहारीलाई योभन्दा ठूलो सहयोग के हुन सक्थ्यो र?
यो लकडाउनमा महशुस गरेको एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने घरमा थुनिएर पत्रकारिता गर्न कठिन छ। तर नेपालका धेरै महिला पत्रकारहरुले सधै सामाजिक लकडाउनमा रहेरै काम गरिरहेका छन्। पत्रकार महिलाकै अवस्था यस्तो छ भने अरु महिलाले भोगेको सामाजिक लकडाउन झन् कति कहाली लाग्दो होला? यी सामाजिक लकडाउनको विषयमा हामीले कहिले चर्चा गर्ने?
मानव जातीमै संकटको रुमा वर्णन गरिएको कोरोनाको लकडाउनले सबै आजित भएका छौँ। र यसलाई छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर विज्ञदेखि सर्वसाधारणले सुझाव र भाग गर्दै आएका छन्। तर महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम,आदिवासी, जनजाती र अल्पसंख्यकहरुले भोगिरहेको सामाजिक लकडाउनले उनीहरुको जीवन कति पिरोलिएको होला?
उनीहरु माथि लादिएको सामाजिक लकडाउन अन्त्य गर्न बहस कहिले गर्ने? यो सामाजिक लकडाउनलाई अन्त्य गर्न तयार नहुनु हुने हो भने हामी मानव जाति भएको नै के अर्थ होला र?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २३, २०७७, ०९:१४:००